မျက်နှာအလှပြင်ပစ္စည်းများ ( 259 )
နှုတ်ခမ်းအလှပြင်ပစ္စည်းများ ( 100 )
ပါးနီများ ( 100 )
မျက်လုံးအလှပြင်ပစ္စည်းများ ( 261 )
အလှပြင် Tools များ ( 34 )
မျက်ခုံးမွှေးပုံသွင်း (3)
လက်သည်းအလှပြင်ပစ္စည်းများ ( 15 )
မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးများ ( 40 )
မျက်နာသုံးဂွမ်းများ ( 18 )
မျက်နှာထိန်းသိမ်းရေး ( 1148 )
တိုနာများ ( 162 )
မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာများ ( 209 )
မျက်နှာလိမ်းခရင်မ် ( 179 )
အသားအရေထိန်းသိမ်းပစ္စည်းများ ( 143 )
မျက်လုံးလိမ်းခရင်မ် ( 44 )
မျက်နှာကပ်ခွာများ ( 139 )
လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ( 32 )
နေလောင်ခံခရင်မ် ( 77 )
ရေချိုးဆပ်ပြာ ( 130 )
ဆပ်ပြာ (7)
လက်ဆေးဆပ်ပြာရည် ( 1 )
လက်ဆေးဆပ်ပြာနှင့်ဂျလ်များ (0)
ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများ (0)
ရေချိုးဆပ်ပြာ ( 120 )
ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်း ( 254 )
ခန္ဓာကိုယ်လိမ်းခရင်မ်များ ( 218 )
လက်နှင့်ခြေထောက်လိမ်းခရင်မ်များ ( 1 )
အမွှေးအမှင်ရှင်းလင်းသောခရင်မ်များ (2)
နေလောင်ဒဏ်ကာကွယ်သည့်ခရင်မ်မျယဒ ( 17 )
ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးသုံး ( 26 )
သွားတိုက်တံများ (9)
သွားတိုက်ဆေးများ ( 16 )
ခံတွင်းသန့်စင်ရည် (0)
ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများ (0)
မျက်ခုံးမွှေးရိတ်ဓားများ (6)
အမျိုးသမီးသုံးချိုင်းလိမ်းဆီများ ( 31 )
အမျိုးသမီးသုံးရေမွှေး ( 276 )
အမျိုးသားသုံးရေမွှေး ( 112 )
အမျိုးသားသုံးချိုင်းလိမ်းဆီများ ( 19 )
ဆံကေသာထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းများ ( 8 )
မှုတ်ဆိတ်မွှေးရိတ်ဓားနှင့် ( 19 )
အသားအရေထိန်းသိမ်းရေး ( 35 )
ရေချိုးဆပ်ပြာများ (7)
မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာများ ( 33 )
ခေါင်းလျှော်ရည်များ ( 84 )
ဆံပင်ဆိုးဆေးများ (3)
ဆံပင်လိမ်ဆီများ ( 25 )
ဆံပင်လိမ်းခရင်မ်များ ( 56 )
ဆံပင်အခြောက်ခံစက်များ ( 24 )
ဆံပင်ပျော့ဆေးနှင့်ပေါင်းဆေးများ ( 35 )
အမျိုးသမီးလစဉ်သုံး (6)
လူကြီးသေးခံပစ္စည်းများ (0)
အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးဂွမ်းတောင့်များ (0)
အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်း (6)
အမျိုးသမီးသုံးသန့်စင်ရည် (0)
အမျိုးသမီးနေ့စဉ်သုံးဂွမ်းအပါးသားများ (0)
ကလေးများအတွက် ( 30 )
ကြွက်သားများနှင့်အရိုးများအားဆေး (0)
ဘက်စုံသုံးကျန်းမာရေး အားဆေးများ (3)
အလှတိုးဆေး (9)
အမျိုးသမီးများအတွက် ( 1 )
အမျိုးသားများအတွက် (2)
ပန်းစည်းများ ( 29 )
လတ်ဆတ်သောပန်းစည်းများ ( 25 )
အလှပန်းစည်းများ (3)
လက်ဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး (2)
မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ပစ္စည်းများ (0)
ဥတုရာသီ အလိုက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ (0)
ကောင်လေးအတွက် (0)
ကောင်မလေးအတွက် (0)
Drunk Elephant Shaba Complex Eye Serum 5ml
Drunk Elephant Beste No.9 Jelly Cleanser 30ml
Drunk Elephant Umbra Tinte Physical Daily Defense Broad Spectrum Sunscreen SPF 30 15 ml
A pro-quality AHA/NHA "facial" that resurfaces skin to reveal greater clarity, improved skin texture and tone, andamore youthful-looking appearance.
Straight from the “pip” of the marula fruit, our Virgin Marula Luxury Facial Oil is untouched by any chemical or fragrance, natural or synthetic and remains in its purest form. Drunk Elephant usesaproprietary raw, cold-press extraction and filtration process, resulting in the purest and most concentrated form of the oil, highly absorbable, with its delicate polyphenol antioxidant and fatty acid compounds preserved. Our Marula Oil contains greater concentrations of polyphenols than dark chocolate, green or black teas, which means powerful antioxidant defense against pollution + damaging environmental free radicals.